ဗီနိုင်း Siding သန့်ရှင်းရေး
ညစ်ပတ်နေသောလက်များမှသည်မုန်တိုင်းထန်သည့်အထိအရာအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အိမ်ပတ်လည်ရှိဗီနိုင်းဘက်ကိုလှည့်ပတ်သွားစေနိုင်သည်။ အညစ်အကြေးများ၊ အပင်များအကြွင်းအကျန်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမှိုနှင့်အနာကြီးထွားမှုကိုအားပေးသောကြောင့်၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ရဲ့ဗီနိုင်းဘေးထွက်အသစ်ပြန်လာနိုင်အောင်အပျက်အစီးများနှင့်မှိုဖယ်ရှားခြင်းအဘို့ဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။ မှတ်စု: ဤနည်းသည်တစ်ထပ်အိမ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်တွင်အဆင့်တစ်ခုထက်ပိုပါကသင်၏ကျန်တစ်နေရာသို့ရောက်ရှိရန်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုစဉ်းစားပါ။ အဆင့် ၁ – ဆေးကြောရန်အတွက် Vinyl Siding ကိုပြင်ဆင်ပါ ပြင်ပရှိလျှပ်စစ်ဆိုင်အားလုံးနှင့်အလင်းပစ္စည်းပလပ်စတစ်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းအားဖြင့်အဝတ်လျှော်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါ။ သူတို့ကိုရေများမှအကာအကွယ်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အဖုံးများကိုလုံခြုံစေရန်တိပ်များများများသုံးပါ။ မည်သည့်အပြင်ဘက်ပရိဘောဂကိုမဆိုအိမ်အပြင်ဘက်မှရွှေ့ပါ။ ...
Roll Roofing ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ
Rolling roofing ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအခြားအမိုးထက်ဈေးသက်သာသည်။ သို့သော်လိပ်ခေါင်မိုးသည်ရေလုံသို့မဟုတ်ကြွေပြားများကဲ့သို့မနီးမဝေးမမြင်နိုင်သောခေါင်မိုးများတွင်သာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မြေပြင်မှမမြင်ရသောကြောင့်ပြားချပ်ချပ် (သို့) အမိုးနီးပါးခေါင်မိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးသင်တစ်နေ့တာတွင်သင်လုပ်နိုင်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံပြီး ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ခန့်ကြာရှည်သည့်ပုံမှန်ရေငံခေါင်မိုး၏တူညီသောအချိန်အတိုင်းအတာနှင့်ကြာရှည်မည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်သည်လိပ်ခေါင်မိုးစနစ်တကျတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံအချက်အလက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အမိုးပြင်ဆင်ပါ အပူချိန် ၄၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသည့်အေးသောရာသီဥတုတွင်လိပ်ခေါင်မိုးသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ပါ။ ...
Wood ကကျော် Stucco လျှောက်လွှာ
အဲဒါကိုစနစ်တကျမလုပ်ရင် Stucco လျှောက်လွှာကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ stucco လျှောက်လွှာ၏မှန်ကန်သောဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တကယ်လည်းခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကိုပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတုတ်ချောင်းအတွက်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်သောအရာအတွက်အောင်မြင်သောတုတ်ဖြင့်လျှောက်လွှာကိုပြုလုပ်ရန်အဆင့်များစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်သူတို့နောက်လိုက်ရန်သေချာပါစေ။ အဆင့် 1 – ခံစားချက်ကိုထည့်ပါ သငျသညျသစ်သားမှတိုက်ရိုက်အပေါ် stucco လျှောက်ထားလို့မရပါဘူး။ သစ်သားများကိုစနစ်တကျဖုံးအုပ်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်တုတ်ဖြင့်အသုံးပြုသောမော်တာ၏အလေးချိန်ကိုခံနိုင်ပြီးအလေးချိန်ယူနိုင်သည်။ သစ်သားပေါ်တွင်ခံစားခဲ့ရ ၁၅ ...
6 အဖြစ်များသည့်သဲ Filter ပြProbleနာများ
လူ့ယဉ်ကျေးမှုစတင်ကတည်းကလူများကိုရေစစ်ရန်သဲများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်၊ အင်ဒီးယန်းနှင့်ဂရိလူမျိုးများသည်ဤလှည့်ကွက်ကိုသိခဲ့ကြသည်။ သဲစေ့စေ့များသည်အလွန်သေးငယ်သောအပျက်အစီးများကိုပင်လှပစွာဖယ်ထုတ်ပြီးသန့်ရှင်းသောရေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်ခေတ်ခေတ်၌ပင်သဲများသည်ရေကန်များကိုရေစစ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ရေကူးကန်သဲစစ်ထုတ်စက်များသည်အလွန်ထိရောက်ပြီးအများစုအတွက်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အဘယ်သူမျှမ filter ကိုသော်လည်း, စုံလင်သည်။ အချိန်နှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်တွင်သူတို့သည်ပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအလျင်အမြန်မည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်ကိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုကြီးမားသောပြcauseနာများမဖြစ်ပေါ်မီပြင်ဆင်ပါ။ 1. Filter အတွက်သဲဟောင်း ထူးဆန်းတာကသင့် ...
အဏ္ဏဝါအထပ်သားအတွက်5အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု
အဏ္ဏဝါအထပ်သားများကိုသင်စျေးကွက်တွင်တွေ့ရသောအခြားအထပ်သားအမျိုးအစားများနှင့်တူညီသည်။ အထပ်သားအားလုံးသည်ပါးလွှာသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစာအုပ်ချုပ်သမားနှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ အပြင်ဘက်အထပ်သားနှင့်အဏ္ဏဝါအထပ်သားများအကြားကွာခြားချက်သိပ်မရှိပါဘူး။ ထို့နောက်အဏ္ဏဝါအထပ်သားတွင်အသုံးပြုသောစာအုပ်ချုပ်မှုကိုရေစိမ်ရန်အတွက်ရေးဆွဲထားသည်။ ပြင်ပအထပ်သားများကိုသေချာစွာတံဆိပ်ခတ်။ ကုသပါကအဏ္ဏဝါအထပ်သားများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းအထပ်သားကိုသစ်သားသုံးလွှာမှငါးလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဏ္ဏဝါအထပ်သားနှင့်အပြင်ဘက်အထပ်သားများသည်အလွှာနှစ်ဆရှိသည်။ ဤအပိုအလွှာများသည်အတွင်းပိုင်းအထပ်သားတွင်တွေ့ရသောပျက်ပြယ်များကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်အဏ္ဏဝါအထပ်သားအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုသင်နှင့်မျှဝေလိမ့်မည်။ ၁ သင်ရွက်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါးဖမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်လျှင်၊ လှေတစ်စင်းဝယ်ယူခြင်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးသော ၀ ယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖိုက်ဘာမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအဏ္ဏဝါအထပ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သောဈေးသက်သာသည့်အဟောင်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤအထပ်သားအမျိုးအစားသည်အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်လှေ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်သင့်တော်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်အဏ္ဏဝါအထပ်သားသည်လုံးဝရေစိုခံနိုင်သည်။ ၂။ ...
သင်၏နေအိမ်ရှိ Face Brick ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
မျက်နှာအုတ် ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်စေပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောအဖွင့်နှင့်အုတ်နံရံများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၂၀ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းကအဆောက်အ ဦး များတွင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိအိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်အထူးအချိန်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လူအများစုကနေရာအသစ်အတွက်ထူးခြားသည့်အသွင်အပြင်ကိုပေးရန်အိမ်အသစ်များတွင်မျက်နှာအုတ်တပ်ဆင်ရန်စဉ်းစားကြသည်။ သင်၏တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းအစီအစဉ်များကိုမပြီးဆုံးမီသင့်အိမ်၌အုတ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးအမျိုးမျိုးကို ဦး စွာစဉ်းစားသင့်သည်။ Face Brick အပါအ ၀ င် မျက်နှာအုတ်ကိုအကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ဒီဇိုင်းရှုထောင့်မှကြည့်။ ကောင်းကောင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ...
ကျောက်စရစ်ကားလမ်းသည်အိမ်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး သည်ကိုယ်ပိုင်ကားလမ်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအတော်အတန်နည်းပါးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကတ္တရာသို့မဟုတ်ဘိလပ်မြေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်မတူဘဲအိမ်ပိုင်ရှင်သည်လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ငှားရန်မလိုဘဲဤလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ ကျောက်စရစ်လမ်းမကြီးသည်အိမ်ပိုင်ရှင်သည်မှန်ကန်သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ဗဟုသုတများဖြင့်မိမိတို့ဘာသာသူတို့အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အခြေခံလက်ကိုင်ကိရိယာများကိုကားလမ်းသေးသေးတစ်ခုတွင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်းစတုရန်းပေ ၃၀၀ ကျော်ရှိသောဥယျာဉ်လယ်ထွန်စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကြီးမားသည့်ကားလမ်းတစ်ခုအတွက်လက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချိန်များစွာယူရမည်ဖြစ်ပြီးသင်လိုချင်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်ကိုရရှိရန်များစွာခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်စီမံကိန်းမဆိုကဲ့သို့စီမံကိန်းမတိုင်မီကြိုတင်စီစဉ်ရန်အချိန်ယူရမည်။ သင်မစတင်မှီသင်၏ကားလမ်းအစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် ကျောက်စရစ်ခဲလမ်းကြောင်းများစွာတွင်အဆင့်သုံးဆင့်လိုအပ်သည်။ ခိုင်ခံ့သောအုတ်မြစ်ကိုဖွဲ့စည်းသောပိုကြီးသောကျောက်ရှိပြီးသောအခြေခံအဆင့်ရှိပါသည်။ ၎င်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာသေးငယ်တဲ့စုစုပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျစ်လျစ်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ...
Stucco Siding ဖယ်ရှားခြင်း
သင်သည်သင်၏အိမ်၌ရှိသည့်တုတ်ချောင်းကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်သော်လည်း၊ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကရှုပ်ထွေးမှုအနည်းငယ်နှင့်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တုတ်ချောင်းဘေးဖယ်ခြင်းကိုမြန်ဆန်သောဖြစ်စဉ်ဟုမဆိုလိုပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်အိမ်မှတုတ်ဖြင့်ကပ်ထားခြင်းကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ရှည်လျားပြီးငြီးငွေ့ဖွယ်ရာနှင့်လုပ်အားများစွာလိုအပ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Stucco သည်နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ခံနိုင်သောကြာရှည်ခံဘိလပ်မြေထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ သင့်အိမ်တွင်ရှိသည့်တုတ်ချောင်းနှင့်တွဲဖက်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုမဖယ်ရှားခင်၊ အထွေထွေfromရိယာမှအတားအဆီးအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ အမှိုက်သရိုက်များနှင့်အမှိုက်များကိုကျော်ဖြတ်ခြင်းသည်အလုပ်ခွင်တွင်ဒဏ်ရာရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အပျက်အစီးများအတွက်မျက်စိထွက်ထားပါ။ သင့်အပေါ်သို့ကျသွားသည့်အရာတစ်ခု၏ပင်ရင်းအန္တရာယ်အမြဲရှိသည်။ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိပြုပါ။ ...
ကင်မ် Kinrade ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ခေါင်မိုးသည်လူမှတည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံးအဆောက်အ ဦး များဖြစ်နိုင်သည်။ အမိုးအကာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စွမ်းရည်သည်မူလကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည် homo sapiens ဂူများကဲ့သို့သောသဘာဝကာကွယ်မှုအပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်ရန်။ ၎င်းသည်ရေကိုနေရာချထားသူများ၏အောက်ဘက်နှင့်အဝေးသို့ညွှန်ကြားသည့်အရွက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းများပြောင်းလဲသွားသော်လည်းခေတ်သစ်ခေါင်မိုးအများစုသည်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အလားတူတိမ်းညွတ်သည့်ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းအစိုဓာတ်မ ၀ င်ဘဲရေကိုရွေ့လျားနေသော overlaying shingles နှင့်အတူရှိသည်။ ...
၆။ PVC ရွာသားများသို့ပြောင်းရန်အကြောင်းရင်းများ
အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်သတ္တုမှ PVC ရွာသားများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ အားသာချက်များမှာ PVC အပေါက်များသည်အားကောင်းပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ စျေးသိပ်မကြီး၊ ကြာရှည်ခံ၊ သငျသညျကွေးသတ္တုရေကျဉ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ထိုပစ္စည်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ချက်ချင်းရရှိသည်။ သင်၏အိမ်ရှိရေကျဉ်းကျဉ်းများနှင့်ရေစိုထုတ်မည့်အချိန်ကိုအစားထိုးရန်အချိန်တန်လျှင် PVC ကိုသံဖြူသို့မဟုတ်လူမီနီယံတို့အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စဉ်းစားပါ။ ၁ PVC ရေကျင်းသို့ပြောင်းရန်ပထမအကြောင်းပြချက်မှာအားသာချက်ဖြစ်သည်။ PVC ကိုပုံသွင်းထားသောပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ဖောက်သည်တစ်ခုအားစဉ်ဆက်မပြတ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ...